လမစေ့ဘဲမွေးဖွားလာသော ကလေးများကို ပြုစုစောက်ရှောက်ခြင်း – nutri-knack
လမစေ့ဘဲမွေးဖွားလာသော ကလေးများကို ပြုစုစောက်ရှောက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်မတိုင်မီ မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေကို လမစေ့ဘူးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုလမစေ့ဘဲ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ကလေးစောပြီး မွေးလေ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေ များလေပါပဲ။ ဒီလိုလမစေ့ဘဲ မွေးတဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ ဘယ်လို နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးမျိုးကိုမဆို မွေးကင်းစကလေး အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခန်းမှာထားပြီး ကုသမှုခံယူရပါမယ်။
>> လမစေ့ဘဲမွေးတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေက ဘာကြောင့်အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုခံယူဖို့လိုသလဲ?
လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးငယ်တွေက လောကကြီးမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိရိယာ အလုံအလောက် တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အဆုတ်၊ အစာခြေစနစ်၊ ခုခံအားစနစ်နဲ့ အရေပြားအပါအဝင် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးမှာ ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ယနေ့ခေတ် ဆေးပညာတွေက ဒီကလေးလေးတွေက သူ့ဟာသူ ကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်တဲ့အထိ ကလေးရဲ့ မွေးကင်းစနေ့ရက်တွေ၊ ရက်သတ္တပတ်တွေ၊ လတွေမှာ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ဆေးပညာနဲ့ အထောက်အကူ ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါက မွေးကင်းစကလေးတွေကို သေချာအကာအကွယ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်အထိ သူတို့လေးတွေရဲ့အိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာဆိုရင် သေချာသင်ကြားထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ စောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်တွေ၊ အသက်ရှူနဲ့ အသက်ပြန်လည်နှိုးဆွပေးတဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲက ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ကိရိယာတွေကြည့်ရတာ စိတ်ရှုပ်စရာဆိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို သိထားရင် စိတ်သက်သာရာ ရနိုင်ပါတယ်။
>> စောင့်ကြည့်ပြီး သတိပေးသောစနစ်
စောင့်ကြည့်တဲ့စက်တွေက ဆေးရုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပေမယ့်လည်း သူတို့က နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူနှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ အပူချိန်တွေကို စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ သွေးတွင်းက အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းတာဖို့အတွက် pulse oximeter ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ရင်ဘတ်၊ လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ကပ်ခွာတွေ တပ်ထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက စောင့်ကြည့်စက်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဌာနမှာ သတိပေးသံမြည်တိုင်းလည်း စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
>> အသက်ရှူ အထောက်အကူပစ္စည်းများ
ကလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးပြုရတဲ့ အသက်ရှူ အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလည်း မတူကြပါဘူး။
အသက်ရှူပိုက် - ကလေးရဲ့ လေပြွန်ထဲကို ပိုက်ထည့်ပြီး နွေးးထွေးစိုစွတ်တဲ့လေနဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေကို ပေးပါတယ်။
အသက်ရှူစက် - အသက်ရှူပိုက်နဲ့ စက်ကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ကလေးရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ၊ လေထုဖိအားနဲ့ အသက်ရှူနှုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
C-PAP - သူ့ဘာသာသူ အသက်ရှူနိုင်ပေမယ့်လည်း လေတွေ အဆုတ်ထဲ ရောက်ဖို့အတွက် အကူအညီလိုသေးတဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေအတွက် သုံးပါတယ်။
Oxygen hood - ဒါက ကလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ အုပ်ထားပြီး ကလေးကို အောက်ဆီဂျင် မှုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ပြွန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ ပလတ်စတစ်သေတ္တာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
>> မွေးကင်းစကလေးငယ်များကို အစာအာဟာရပေးခြင်း
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး အာဟာရပေးတဲ့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
သွေးကြောထဲသွင်းခြင်း - ကလေးရဲ့ သွေးစီးကြောင်းထဲကို အာဟာရဓာတ်တွေ တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစာချေစနစ် ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် ပုံမှန်အတိုင်း မစုပ်နိုင်၊ မမျိုချနိုင်၊ အသက်မရှူနိုင်တဲ့ ကလေးတွေမှာ သုံးပါတယ်။ အခြားကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကို ကုသရာမှာလည်း သုံးပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဦးရေပြား၊ လက်၊ ခြေထောက်က သွေးကြောတွေထဲကို ပိုက်ထည့်ထားနိုင်ပတယ်။
ချက်ပိုက် - ဒါကတော့ ကလေးရဲ့ချက်တိုင်က သွေးကြောထဲကို ခွဲစိတ်ပြီး ပြွန်တစ်ခုထည့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာတော့ ရောဂါပိုး ဝင်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းစတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းကို တကယ်ကို လိုအပ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ ကလေးကို ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အာဟာရပေးဖို့ လိုမှသာပဲ သုံးပါတယ်။ ဒီကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီနည်းလမ်းက အာဟာရဓာတ်တွေ ရရှိစေဖို့အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု အရှိဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။
ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းပိုက်များမှ အစာကျွေးခြင်း - ကလေးရဲ့နှာခေါင်း (သို့) ပါးစပ်ထဲကို ကွေးညွတ်လို့ရတဲ့ ပြွန်သေးသေးလေးထည့်ပြီး အစာကျွေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက နို့ရည်ကို အစာချေဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ကိုယ်တိုင် မစုပ်နိုင်သေး၊ မျိုမချနိုင်သေး၊ အသက်မရှူနိုင်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သုံးပါတယ်။
ဗဟိုပိုက်လိုင်း - ဒါကတော့ ပိုပြီးကြီးတဲ့ သွေးးပြန်ကြောထဲကို ပိုက်ထည့်တဲ့နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သွေးပြန်ကြော သေးသေးလေးတွေကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အာဟာရတွေ၊ ဆေးတွေပေးဖို့ လိုရင် သုံးပါတယ်။
-Incubator - ဒါကတော့ ကလေးတွေကို အနွေးဓာတ်ပေးပြီး ပိုးမွှားနဲ့ ဆူညံမှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပလတ်စတစ်အကြည်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကလေးထည့်တဲ့ကိရိယာ ဖြစ်ပါတယ်။
-Bili lights - ကလေး အသားဝါတာကို ကုသဖို့အတွက် ကလေးရဲ့ incubator မှာ တပ်ထားတဲ့ မီးချောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လမစေ့တဲ့ကလေးတွေကို မိခင်ရဲ့အဝတ်မပါတဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ တင်ထားပြီး ကလေးရဲ့ဝမ်းဗိုက်နဲ့ မိခင်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို ထိတွေ့စေကာ ကလေးကို မိခင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကြားမှာ ထားစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့နားက မိခင်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာ ရှိစေဖို့အတွက် ကလေးကို ဘေးစောင်းလေး ထားပေးပါ။ လေ့လာမှုများစွာအရ ဒီနည်းလမ်းက အကျိုးသက်ရောက်မှု များတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက ကလေးတွေ အောက်ပါတို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် - လေ့လာမှုတွေအရ အမေတွေမှာ သူမရဲ့ကလေးနဲ့ အပူချိန်ဆက်သွယ်မှု ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကလေးက အေးနေတယ်ဆိုရင် ကလေးကို အနွေးဓာတ်ပေးဖို့အတွက် မိခင်မှာ အပူချိန် တက်လာပါတယ်။ အပြန်အလှန်ပါပဲ။
မိခင် နို့တိုက်ခြင်း - သားပိုက်ကောင်ပုံစံက မိခင်နို့ကို ကလေး အလွယ်တကူ ထိတွေ့စေပြီး အသားချင်း ထိတွေ့မှုက နို့ပိုထွက်စေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေခြင်း - သားပိုက်ကောင်ပုံစံက ကလေးကို ပိုပြီးနှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေကာ ခန္ဓာကိုယ် လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတာက ဆေးရုံမှာနေရတဲ့အချိန်ကို တိုစေပါတယ်။
မိခင်နဲ့ကလေးအကြား ဆက်သွယ်မှု ပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။
မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးခြင်းက ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး မိခင်နဲ့ကလေးကြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုကို အားကောင်းစေတယ် ဆိုတာကို ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး သိရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လမစေ့ဘဲ မွေးလာတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေကို မိခင်နို့တိုက်ဖို့ ခွင့်မပြုပါဘူး။
ကိုယ်ဝန် ၂၅-၂၉ ပတ်ကြားမှာ မွေးလာတဲ့ လမစေ့တဲ့မွေးကင်းစကလေး အများစုကို သွေးကြောထဲကနေပြီး အစာပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေနဲ့ သေချာမေးမြန်း ဆွေးနွေးပါ။ ကလေးကို မတိုက်ရသေးဘူးဆိုရင် နို့ရည်တွေကို ညှစ်ထုတ်ပြီး သေချာသိမ်းဆည်းထားကာ ကလေးကို တိုက်လို့ရတဲ့အချိန်ကျမှ ပြန်တိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အစာချေစနစ်နဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးက မိခင်နို့ကို အစာချေနိုင်ပြီလား (သို့) သိမ်းထားတဲ့ နို့ရည်တွေကို ဘယ်အချိန်မှ တိုက်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်က ပြောပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ အသက်ရှူစနစ် ကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ မိခင်နို့ စတိုက်နိုင်ပါပြီ။ ၃၅-၃၇ ပတ်ကြား မွေးဖွားတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတော့ မိခင်နို့ တန်းတိုက်လို့ ရပါတယ်။
>> မွေးကင်းစကလေး အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဌာနမှာ ကိုယ်က ဘယ်နေရာက ပါဝင်နိုင်သလဲ?
ကလေးအမေနဲ့အဖေ နှစ်ယောက်လုံး ကလေးနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေက အားပေးပါလိမ့်မယ်။ မိဘတွေကို အကြံပေးချင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ -
ကလေးကို တတ်နိုင်သမျှ များများထိတွေ့ပါ။ ငြင်သာစွာ ထိတွေ့ပါ။
ကလေးကို စကားပြောပေးပါ။ ကလေးက ကိုယ့်ရဲ့အသံကို မှတ်မိနေပြီး အသံကြားရင် စိတ်သက်သာရာ ရစေပါတယ်။ ကလေးကို စကားပြောပေးတာအပြင် စာဖတ်ပြတာ၊ သီချင်းဆိုပြတာတွေလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို ပထမဆုံး ရေချိုးပေးတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ပါ။ ကလေးရဲ့ တိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး အဝတ်စ (သို့) ရေမြှုပ်နဲ့ ချိုးပေးရမလား ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပါ။
ကလေးရဲ့ ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာပါ။